Alpes Skandinavianina: toetra, fiaviana ary tendrombohitra | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 29/03/2021 09:57 | Haibolantany
ny Alpes skandinavianina Ny manan-danja indrindra dia an'ny saikinosy Skandinavia ary any avaratra atsinanan'i Eropa no misy azy. Ity faritra iray manontolo ity dia i Norvezy, Suède ary ampahany amin'i Failandy. Ny tendrombohitra Skandinavianina dia efa fantatry ny olona hatramin'ny ela isaky ny miresaka momba ireo firenena Nordic. Manodidina ny 25% ny saikinosy manontolo dia ao anatin'ny faribolan-tendrontany Avaratra. Tandavan-tendrombohitra izay manerana ny saikinosy Skandinavia manomboka eo avaratra atsinanana ka hatrany atsimo andrefan'ny 1700 kilometatra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany ary ny jeôlikan'i Alpes Scandinavian.
2 Scandinavian Alpes sy ny saikinosy
3 Alpes skandinavianina lehibe
Tandavan-tendrombohitra izay manerana ny saikinosy Skandinavia ary manana 1700 kilometatra ny halavany. Mizara ho vondrona 3 izy arakaraka izay nosarahinao. Amin'ny lafiny iray, ny Kiolen dia tompon'andraikitra amin'ny fanasarahana an'i Suède sy Norvezy, ny tendrombohitra Dofrines dia mampisaraka an'i Norvezy ary ny Tulians dia any amin'ny faritra atsimo. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny ny tandavan-tendrombohitra Skandinavianina nisy 400 tapitrisa taona lasa izay. Ny tandavan-tendrombohitra ankehitriny izay mamorona ny Alpes Skandinavian dia natsangana noho ny fifandonana teo amin'ireo takelaka kaontinantaly Amerika Avaratra sy ny Baltika. Izany rehetra izany dia nitranga tokony ho 70 tapitrisa taona lasa izay.
Ny Alpes Skandinavianina dia tsy niavaka tamin'ny hahavony, fa noho ny hatsaran-tarehiny sy ny hareny amin'ny harena voajanahary. Ny haavo avo indrindra dia ny Tendrombohitra Glittertind, 2452 2469 metatra ny haavony, ary Galdhøpiggen, 1850 metatra ny haavony, samy ao amin'ny faritanin'i Norvezy. Ny anaran'ny saikinosy dia avy amin'i Scania izay teny taloha nampiasain'ny Romanina tamin'ny taratasin-dry zareo. Ity teny ity dia manondro ireo firenena avaratra. Miaraka amin'ny velarantany 1320 km miala ny avaratra ka hatrany atsimo, 750000 m avy atsinanana ka hatrany andrefana ary faritra mihoatra ny XNUMX km toradroa Ity no saikinosy lehibe indrindra amin'ny kaontinanta eropeana.
Scandinavian Alpes sy ny saikinosy
Ny saikinosy manontolo dia voahodidin'ny rano isan-karazany. Amin'ny lafiny iray, manana ny Ranomasina Barents isika amin'ny faritra avaratra, ny Ranomasina Avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana izay tafiditra ao ny sisan'i Kattegat sy Skagerra. Kattegat dia nanjary nalaza be noho ny andiany Vikings malaza be. Any atsinanana dia ny Ranomasina Baltika izay misy ny Hoalan'i bothnia ary any andrefana dia ny Ranomasina Norvezy.
Ny faritra iray manontolo dia voahodidin'ny nosy Gotland manangona nosy mahaleo tena Alland. Diet no iray hita eo anelanelan'i Suède sy Failandy. Ity faritra iray manontolo ity dia manan-karena vy, titanium ary varahina, izany no antony nanankarena be azy hatramin'ny andro taloha. Any amoron'ny Norvezy Hita ihany koa ny fametrahana solika sy gazy voajanahary. Ny fisian'ireo tahiry ireo dia mifandray akaiky amin'ny firafitry ny takelaka tektonika taloha sy ny magma izay afaka niditra tao anelanelan'ny takelaka.
Ny Alpes Skandinavianina sy ny saikinosy manontolo dia manana faritany be tendrombohitra toa tombony. Ny antsasaky ny faritra dia rakotry ny tany be havoana izay an'ny Baltic Shield taloha. Ny ampinga Baltika dia tsy inona fa ny fananganana vatolampy izay natsangana tokony ho 400 tapitrisa taona lasa izay ary izany indrindra noforonin'ny vato metamorphic kristaly. Ireo vatolampy metamorphic kristaly dia nateraka vokatry ny fihenan'ny hafainganam-pandeha izay vokatry ny magma noroahina tamin'ny takelaka. Ny ankamaroan'ny Andes Skandinavianina dia any Norvezy, raha any Suède kosa ny faritra be tendrombohitra dia miompana amin'ny andrefan'ny firenena. Etsy ankilany, ny tampon'ny Finnish dia ireo izay ambany kokoa.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ity saikinosy ity dia manana karazan-drafitra ara-jeografika maro karazana izay ahitana morontsiraka, ranomandry, farihy ary fjords. Ny fjords dia miendrika V satria izy ireo dia noforonina noho ny fikaohin'ny glacial ary hipetrahan'ny endrin'ny ranomasina. Ny fjords any Norvezy no tandindona indrindra ary ireo izay hita amin'ny andiany Viking. Raha mankany avaratra andrefan'ny faritra isika dia afaka mahita ireo Alpes Scandinavian izay antsoina koa hoe tendrombohitra mihoatra ny 2000 metatra ny haavony. Tsy ny hahavony ihany no ahafantarana azy ireo, fa koa ny mari-pamantarana manamarika ny avaratry ny sisintany manelanelana an'i Norvezy, Suède ary Failandy.
Misy tendrombohitra 130 mahery mihoatra ny 2.000 metatra ny haavony. Nozaraina tamina faritra 7 fantatra amin'ny anarana hoe: Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell, Rondane, Sarek ary Kebnekaise. Ny ankamaroan'ny tendrombohitra dia mifantoka any Jotunheimen, any Norvezy atsimo.
Alpes skandinavianina lehibe
Andao hojerentsika hoe iza ireo Alps Skandinavian lehibe indrindra araka ny faritany.
Ny tampon'isa avo indrindra amin'ny saikinosy Skandinavia dia any Norvezy. Raha ny tena izy, ireo tendrombohitra folo avo indrindra ary zaraina eo anelanelan'ny distrikan'i Oppland sy Song og Fjordane. Ny Tendrombohitra Galdhøpiggen, amin'ny 2469 m, no tampony avo indrindra any Norvezy sy ny saikinosy Skandinavia. Ny toerana faharoa dia alain'ny Mount Glittertind manana 2465 m amin'ny toerana avo indrindra. Talohan'ny nandraisana azy io ny teboka avo indrindra, saingy satria ny refy namboarina dia nanisa «glacier» izay teo an-tampon'ny tampon'ny voajanahary. Nandritra ny taona maro dia niempo ny glacier ary efa azo natao ny nametraka tsara ny fandrefesana sy ny filaminana.
Any Suède dia misy tendrony 12 mihoatra ny 2000 metatra ny haavony. Ny ankamaroan'izy ireo dia hita ao amin'ny Sarek National Park ary any amin'ny faritra avaratry ny Kebnekaise dia manasongadina ny tampon'ny Kebnekaise miaraka amin'ny 2103 metatra. Izy io no tampon'isa ambony indrindra raha jerena ireo glacier rehetra manarona azy. Raha tsy teo ireo glasy ireo dia ny Kebnekaise Nordtoppen no tampony avo indrindra
Raha mankany amin'ny tampon'ny Failandy isika dia saika ambanin'ny 1500 metatra ny haavon'izy ireo ary ny tena malaza dia ao amin'ny Laplanda Finnish. Misongadina eto Ny tendrombohitra Halti dia 1324 metatra ny haavony ary izy no avo indrindra. Any Norvezy no misy azy ary mizara fiforonan'ny tendrombohitra, Failandy.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Skandinavian Alpes sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Alpes Skandinavianina